Vakio ny tantaran'ny fahombiazan'ny mpianatra #MyHodgesStory »Hodges University
Tantaran'ny fahombiazan'ny mpianatra
Ny # MyHodgesStory an'ny iray alina dia efa voalaza. Mpianatra amin'ny oniversite voalohany, mpianatra tranainy, enti-mody an-tapitrisany dolara, #HodgesHeros, nahazo diplaoman'ireo ray na reny tokan-tena…. miavaka ny tantaran'ny tsirairay. Ny zavatra iray izay mijanona ho marina ho azy rehetra dia ny fananan'izy ireo herim-po sy ny fiara hitondra ny dingana voalohany.
Midira amin'ny laharanay ary ho aingam-panahy ho an'ny Hawks ho avy miaraka amin'ny tantaram-pahombiazan'ny mpianatrao.
Inona ny tantaranao # MyHodgesStory? Atombohy ny dia anio!
Dr. John Meyer, Hodges
Filohan'ny oniversite & Alumni (BS & MBA)
“Toy ny mpianatra Hodges maro dia nanomboka ny fianarako ambony amin'ny fianarako taty aoriana aho ary tsy maintsy nandanjalanja ny asa manontolo andro, ny fianakaviana ary ny oniversite.”
Inona ny tantara mahomby tianao hotantaraina? Avelao izahay hanampy anao hahita ny lalanao hanatevin-daharana ireo nahazo diplaoma Hodges an'arivony maro androany.
Tompon'ny mpanampy Pro
CFO Naples Lumber
Eliana Tardio - Serasera sy haino aman-jery
Maninona no misafidy Hodges?
“Tiako ny profesora [Andrea] Fortin, ary voninahitra ho ahy ny nanolorany ahy ho Student of the Month. Vonona hanampy foana izy, misokatra hatrany ho an'ny mpianany ny varavarany, ary tena mahay mandanjalanja sy mahay mandanjalanja izy rehefa miara-miasa amin'ireo mianatra olon-dehibe toa ahy. Tena ankasitrahako izany, ary afaka milaza am-pahatsorana aho fa ny fifandraisana dia nanampy ahy hahatratra ity nofinofiko hahavita diplaoma any Etazonia ity, ary ankehitriny, hiasa amin'ny mari-pahaizana master. ”
“Mahatsapa ho nahazo aingam-panahy ianao ary voatosika hanitatra ny fahaizanao manokana ary hamorona, ho tomponao manokana, ary hanao ilay fanovana tianao ho hita eto amin'izao tontolo izao. Ny fahazoana diplaoma dia tsy momba ny anaram-boninahitra. Momba ny fahalalana manova anao no ahafahanao lasa olona tsara kokoa ”
Collier County Fire mpiady
Talen'ny Clinic ALS
Amelia Vasquez - Mpianatra nahazo diplaoma intelo
“Tsy maintsy nampiasa vola tamin'ny tenako aho. Nahatsapa aho fa [hody any am-pianarana] dia hanome fotoana tsara kokoa amin'ny famoronana ho avy vaovao, ary afaka ny ho tonga ohatra mahomby ho an'ny zanako aho, ”hoy izy. “Te hanana fahalalana sy fahaizana bebe kokoa azoko ampidirina ao aho avy eo ny asa aman-draharaha na ezaka amin'ny ho avy. ”
Nahazo diplaoma roa tao anatin'ny efa-taona Amelia cNanolo-tena hanokana fotoana mety amin'ny zanany, hamita ny enti-modiny any an-tsekoly ary hanome ny endriny tsara indrindra ho azy mandritra ny asany, Vasquez dia nanamboatra azy io ary nahavita ny MBA azy tamin'ny 2002.
“Ny fahombiazako dia omeko ho an'ireo mpampianatra mazoto sy be fanoloran-tena rehetra ao Hodges…“ azonao atao izany, ”“ araho ny nofinao. ” Nitazona fahatokisana aho avy eo izay nanosika ahy hivoatra, ”hoy ny fanazavany. "Matoky aho, voatosika ary be fientanam-po ary mamporisika izay rehetra mieritreritra ny hiverina any an-tsekoly hijery an'i Hodges."
VP an'ny Operations Cable USA
Kayla sy Ryan Harp
Nahazo diplaoma veteran